warkii.com » DAAWO FADEEXADDAN: Erling Haaland Oo Bannaanka Looga Saaray Xaflad Saq-dhexe Ka Socotay Hotel Lagu Caweeyo
DAAWO FADEEXADDAN: Erling Haaland Oo Bannaanka Looga Saaray Xaflad Saq-dhexe Ka Socotay Hotel Lagu Caweeyo
Weeraryahanka da’da yar ee Erling Haaland ayaa bannaanka looga tuuray xaflad ka socotay hotel lagu caweeyo oo ka dhacday waddankiisa Norway.
Baraha bulshada gaar ahaan Snapchat-ka ayaa lasoo geliyey muuqaal laga duubay Erling Haaland oo dibedda loo tuuray, isla markaana qaab fool xumo ah loo jiid-jiidayo, waxaana la rumaysan yahay in falkani uu dhacay Sabtidii.
Xiddigan oo wacdaro ka dhigay horyaalka Bundesliga iyo Champions League oo uu goolal badan ka dhaliyey, waxa aanay dad badan ogeyn qaabka uu yahay dhaqankiisa bannaanka ee ka baxsan garoomada, laakiin sida laga arkay muuqaallada dhex wareegaya baraha bulshada, waxa laacibkan waqtigiisa fasaxa hadhaysay fadeexad.
Ciidanka sugaya ammaanka Hotelka lagau caawaynayo ayaa kasoo jiiday Erling Haaland gudaha xafladda, waxaanay keeneen bannaanka iyagoo shaadhkiisa dhinacyada haysa, waxaana markii bannaanka la keenay uu 19 jirkani isku dayay inuu u sababeeyo ciidanka amaanka wixii ka dhacay gudaha ee sababay in bannaanka loosoo tuuro.
Laakiin sarkaalkan ayaa iskaga dhaqaaqay Erling Haaland oo bannaanka taagan, una muuqda inuu aad u cadhaysan yahay korna u qaylinaya.
Laba qof oo goobta joogay ayaa Haaland ku joojiyey bannaanka iyadoo askariguna uu dib ugu laabtay gudaha.
Warbaahinta dalka Norway iyo kuwa Jarmalka midna may helin xaqiiqada waxa ka dhacay gudaha ee sababay in xafladda laga saaro Erling Haaland, laakiin waxa la tuhunsan yahay inuu cabsanaa oo aanu miyirkiisu taam ahayn.
Si kastaba, Haaland ayaa xili ciyaareed wanaagsan soo qaatay, waxaanu dhaliyey 44 gool dhamaan tartamada oo uu usoo kala ciyaaray Borussia Dormund iyo Salzburg, iyadoo uu dhalintiisana ku darsaday 10 gool oo uu caawiye ka noqday.